शिल्पा शेट्टी बिबादित बनाएको प्रमुख ५ घटाना यस्ता छन जसले शिल्पालाई पुर्यायो निकै चर्चामा ! – Taja Khawar
शिल्पा शेट्टी बिबादित बनाएको प्रमुख ५ घटाना यस्ता छन जसले शिल्पालाई पुर्यायो निकै चर्चामा !
प्रकाशित मिति: बिहिबार, साउन १४, २०७८ समय: १८:३९:२८
एजेन्सी । यो पहिलो पटक होइन जब शिल्पा शेट्टी चर्चामा आएकी हुन् । उनी कहिले आफै त कहिले श्रीमानका कारण चर्चामा आउँछिन् । अहिले उनका पति राज कुन्द्राका कारण शिल्पा चर्चामा छन् । उनका पतिलाई अ श्लि ल फिल्म निर्माण गरेर सोसल मिडियामा राखेको अभियोगमा अनुसन्धानका क्रममा छन् । शिल्पा यसभन्दा पहिले पनि धेरै विवादमा परेकी छन् । कहिले उनी आफ्ना तस्बिरका कारण विवादित हुन्छिन् भने कहिले कुनै घटनाले ।
रिचर्ड गेरेसंगको चुम्मन २००७ मा, शिल्पा शेट्टी चर्चाको विषय बनिन् जब रिचर्ड गेरेले एक कार्यक्रमको दौरान अभिनेत्रीलाई चुम्मन गरे। यो ए ड् सको बारेमा सचेतना फैलाउने कार्यक्रम थियो। यस विवाद पछि शिल्पा शेट्टीको देशभरि कडा विरोध गरियो। शिल्पाले यसमा खास महत्व दिइनन्।
बोल्ड फोटोशूटले समस्या बनायो २००६ मा शिल्पा शेट्टीको बिरूद्ध गैर जमानती वारन्ट जारी गरियो। यो वारन्ट मदुरै अदालतले बोल्ड फोटोका कारण गरेको थियो । शिल्पाले यो फोटो शू ट एक पत्रिकाका लागि गरेकी थिइन् ती दिनहरूमा शिल्पाको विवाह भएको थिएन।
जब एक बाबाले चुम्मन गरे यो २००९ मा हो, जब शिल्पा शेट्टी सखीगोपाल मन्दिर गइन्। एक साधुले उनको गालामा चुम्मन गरे र यो फोटो सोशल मीडियामा निकै छायो । यसको जवाफमा शिल्पाले एउटा बुवाले आफ्नो छोरीको गालामा चुम्मन गर्नु कुनै ठुलो कुरा नभएको भन्दै प्रतिकृया दिएकी थिइन् । तपाईलाई पनि आफ्नो बुवाले कहिल्यै चुम्मन गर्नुभएन ? भन्दै प्रश्न राखेकी थिइन् ।
आईपीएल सट्टेवाजी लगाएको आरोप जब राज कुन्द्रा र शिल्पा शेट्टीको टीम राजस्थान रोयल्सले आईपीएल खेल्न सुरु गरे, राज कुन्द्रालाई म्याच फिक्सिंगको आरोप लगाइएको थियो। राज आफ्नो टीम मा सट्टेबाजी गर्ने सात सट्टेबाजहरु संग सम्पर्क मा थिए। यस समयमा शिल्पा शेट्टी चर्चाको बिषय बनेकी थिइन्।
राजकी पहिलो पत्नीले पनि लगाइन् गम्भिर आरोप राजकी पहिलो पत्नी कविता विश्वास गर्छिन् कि शिल्पा शेट्टी उनको र राजको सम्बन्ध बिच्छेदको पछाडि एक मात्र कारण हुन्। उनले आफ्नो सम्बन्धविच्छेदको बेलामा बारम्बार यसो भनेकी थिइन् । शिल्पाको कारण हाम्रो सम्बन्ध विग्रिएको हो । राजको पहिलो श्रीमतीसँग सम्बन्ध विच्छेद पछि उनले शिल्पा शेट्टीसँग विवाह गरेका हुन् ।
Last Updated on: July 29th, 2021 at 6:39 pm